केबल सम्बन्धहरु को बोल्ने, केबल कुनै प्रकारको माउन्ट अक्सर प्रयोग गरिन्छ कि उपभोज्य मतलब।
Screed केबल धेरै केबल तार बीम समाधान गर्न, त्यो छ, एक अर्को संलग्न गर्न प्रयोग गरिएको छ। एक वाहक छ जो कुनै पनि डिजाइन, को केबल एक बन्डल गर्न पनि यसको प्रयोग संलग्न गर्न सकिन्छ। यो एक बीम वा खाँबो, उदाहरणका लागि एक प्रश्न छ।
केबल टाई दुई प्रकार को हुन सक्छ:
1 मानक केबल टाई। त्यो कुनै पनि केबल खींचती।
2. "पेच" - मानक लक, तर स्क्रू वा स्क्रू लागि विशेष खोल्ने संग पर्खाल वा अन्य कुनै पनि सतहमा यसलाई समाधान गर्न सक्षम हुन।
ती दुबै आकार र रंग मा फरक हुन सक्छ।
केबल सम्बन्ध धेरै फरक लम्बाईहरू हुन सक्छ। वजन सीधा समानुपातिक यसलाई सामना गर्न सक्छन् भनेर यो लम्बाइ देखि। यस कारण लम्बाइ रूपमा एक यस्तो विकल्प बारे धेरै गम्भीर हुनुपर्छ लागि यो छ। तथ्यलाई प्रत्येक नोड को सही संचालन सही सारा सिस्टम मा सञ्चालन गर्न आवश्यक छ भन्ने छ।
सौंदर्यबोध घटक पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। सम्झना, competently र पेशेवर राखे केबल मात्र मजबूती काम छैन, तर पनि सुन्दर हेर्न, यो खण्डमा हस्तक्षेप गर्नेछ वा "आफ्नो खुट्टा अन्तर्गत रचनाहरू।"
अक्सर, सँगै केबल सम्बन्धहरु संग थप किनेको र माउन्ट कोष्ठक विशेष किरा।
सम्बन्ध केबल को कुनै पनि प्रकारको लागि उपयुक्त हो - यो हुन कि मुड जोडी, समाक्षीय वा टेलिफोन तार।
केबल टाई केबल कस्नु लागि अर्को नाम हो।
त्यहाँ केबल सम्बन्धहरु इरादा गर्दै छन् जो बाहिर प्रयोग गर्न छन्। यस्तो कलर आफ्नो सबै स्थायी यूवी विकिरण उजागर हुँदा पनि गुण राख्ने। तिनीहरूले कुनै पनि मौसम अवस्था वा कम तापमान, चिस्यान वा हावा को अत्यधिक सूक्खापना गर्न प्रतिरोधी छ जो कुरा बनेको छन्। तिनीहरूले पनि राम्रो आक्रामक रसायन र पनि सल्वैंट्स को बहुमत द्वारा सहन छन्। तिनीहरूले सामान्यतया कुनै पनि विशेष भण्डारण अवस्था आवश्यक छैन। केबल पर्याप्त लचिलो र सजिलै विशेष उपकरण प्रयोग बिना कडा clamps।
तपाईं dowels संग केबल सम्बन्ध स्थापना गर्ने निर्णय भने, तपाईं मात्र एक ड्रिल गर्न आवश्यक हुनेछ। तपाईं एक प्लग सम्मिलित जसमा एक विशेष प्वाल ड्रिल गर्न आवश्यक हुनेछ, त्यसपछि यसलाई आवश्यक Wedges हथौडा छ। एक विश्वसनीय र तयार सुरक्षित। विभाजित लक वैकल्पिक, को भेला लाइन मा तार थप्न वा हटाउन किन्न सक्छन्।
Screed केबल - केबल, साथै यसको लेबलिंग सुरक्षित गर्नका लागि एउटा, सुविधाजनक एकदम छिटो र एकदम आर्थिक तरिका हो। विभिन्न रंग को क्लिप प्रयोग गरेर तपाईं पनि समूह नै प्रकार मा तार अलग गर्न सक्नुहुन्छ।
यस्तो ताले विभिन्न प्रकारका हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, अलग गर्न सकिने, बल, नट, इस्पात, सीढी-प्रकार, पाइप र अन्यसँग फूलको दल लक। तपाईं सबैभन्दा राम्रो र भित्री गर्न उपयुक्त हो कि व्यक्तिहरूलाई चयन गर्नुहोस्। अब तपाईं तार समस्या छैन।
आफ्नो हातले काउन्टरटप टाइल्स
तपाईं वस्तुहरू खरीद गर्दा अनलाइन दोकान नलसाजी जान्नु आवश्यक के। एक पाइपलाइन लाइन कसरी छनौट गर्न
शवर र शौचालय संग Hozblok: सुविधा र सुविधाहरु को विकल्प
आफ्नै हातले निजी घरमा Heating
जनसंख्या ब्यारो: ढेर, जनसंख्या को गठन, जीवित को मानक
कथा Leskova एन एस मा बाँया ह्यान्डको छवि र n राष्ट्रिय वर्णको विशेषताहरू
अनुहार मा निकलने वाला गुलाबी को उपचार: सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम
खराब दिन? यी 10 सुझावहरू तपाईं अवस्था सुधार्न मदत गर्नेछ
सबै धनी मान्छे पालन गर्न7नियम